Estradiol Benzoate Injection (estrogen) - China Ningbo Okwesibili-hormone okuthiwa i
Estradiol Benzoate Injection (estrogen) [Incazelo] Lo mkhiqizo ugodo ephuzi esobala ketshezi oily. [Umsebenzi nokusetshenziswa] Kungaba kwenyuswe ukuthuthukiswa izimpawu zobulili wesibili kanye kumiswa kwezitho zobulili izilwane zesifazane, ukuthuthukisa umsebenzi ukusikwa ngoba uteruses futhi oviducts, ukwandisa abe nozwela uteruses ukuba oxytocin, futhi ukukhuthaza ukuphumula orifices wesibeletho. It uyakwazi kwenyuswe ukuthuthukiswa mammary imbobo uhlelo. Nge esincane progesterone ...
Lo mkhiqizo ugodo ephuzi esobala ketshezi oily.
Kungaba kwenyuswe ukuthuthukiswa izimpawu zobulili wesibili kanye kumiswa kwezitho zobulili izilwane zesifazane, ukuthuthukisa umsebenzi ukusikwa ngoba uteruses futhi oviducts, ukwandisa abe nozwela uteruses ukuba oxytocin, futhi ukukhuthaza ukuphumula orifices wesibeletho. It uyakwazi kwenyuswe ukuthuthukiswa mammary imbobo uhlelo. Nge esincane progesterone, ke ingazisa izilwane besifazane ukuba isifiso sobulili, injabulo yobulili. Lo mkhiqizo kabanzi isicelo agcinwayo ulwelwesi fetus, endometritis, futhi lesizalo pyometra ngemva wokuthumela izilwane zesifazane. Iphinde ingasetshenziswa adingwa yimisipha lesizalo ababuthakathaka lapho ukubambisana ukusetshenziswa ne-oxytocin. Ngaphezu kwalokho, lapho isetshenziswa enqubeni ukuthuthukiswa nezindlala mammary ku lokungeniswa ka lactation izinkomo.
1. ukubambisana ukusetshenziswa ne abakhulelwe Mare Serum gonadotropin ukwenza izimpawu estrous sobala ngesikhathi ekugqugquzeleni estrus: ukuze kube lula ukuthola of estrus futhi wenze izimpawu estrous sobala lapho abakhulelwe Mare Serum gonadotropin sisetshenziswa ukukhuthaza estrus, ujove esicutshini ka 6-8mg ka estradiol benzoate ezingase zithathwe ngosuku lwesibili ngemva kokusebenzisa abakhulelwe Mare Serum gonadotropin.
2. Ukuthuthukisa nozwela imisipha lesizalo ukuze oxytocin: Isicelo estrogen inqubo bokubeletha abakwazi kuphela ukukhuthaza kuvulwa orifices wesibeletho, kodwa ukwandisa abe nozwela imisipha lesizalo ukuze oxytocin. Ngaphambi umjovo we oxytocin, estradiol benzoate liyakushunyayelwa injected, kanye nokushintsha kokudla nokufakwa simiswe ngalendlela lelandzelako: 3-10 mg for izingulube, 5-20mg izinkomo, 10-20mg ngamahhashi, 1-3 mg izimvu, 0.5-2.0mg ngoba izinja, futhi 0.2-0.5mg for namakati.
3. Ukwelashwa kwezifo lesizalo: kungaba aphathe endometritis, lesizalo inertia (subinvolution wesizalo), futsi yagcina ulwelwesi fetus emva kokubeletha uma ukubambisana ukusetshenziswa ne-oxytocin. Estradiol liyakushunyayelwa injected lokuqala (20-30mg emfuyo omkhulu, 10-20mg emfuyo maphakathi nendawo, futhi 5-10mg izilwane ezincane), bese oxytocin kufanele usetshenziselwe ukwelashwa (75-100IU izinkomo namahhashi, 30- 50IU for izingulube nezimvu, 10-25IU ngoba izinja, futhi 5-10IU for namakati); ujove esicutshini noma umjovo intrauterine kufanele zisetshenziswe, kanye ngemva kwezinsuku 7.
4. Ukukhuthaza estrus: ebulilini estradiol benzoate ingasetshenziswa ukukhuthaza estrus ngoba emitholampilo anoestrus izilwane; Nokho, i-estrus walesi sikhathi ngokuvamile abakwazi ukunikeza ifike ukuthuthukiswa evamile follicle ukuba ovulate, kodwa kujwayeleke umjikelezo estrus. I nokushintsha kokudla nokufakwa simiswe ngalendlela lelandzelako: 10-20mg izinkomo namahhashi; 5-10mg for izingulube; 3-5mg izimvu.
1. Ukweqiwa High, yesikhathi eside noma ukusebenzisa okungafanele kwalo mkhiqizo kungadala izinhlumba wesibeletho, isisu, yoma wesibeletho kanye ngokobulili umjikelezo ukuboshwa izilwane zesifazane.
2. contraindicated ezilwaneni ukudla.
3. esetshenziswa kuphela zokugaya isilwane.
4. Akufanele zithintwe omunye umuntu izingane.
Izinsuku ezingu-28 ngoba ezinkomeni, izimvu nasezimbuzini izingulube (eqinisekile); izinsuku ezingu-7 ukuze ubisi (eqinisekile)
Ukubopha futhi engangeni moya; agcinwe ngaphansi lokushisa 30 ℃.
Olandelayo: Gonadotropin ngoba Injection (GnRH)
LHRH-A2 ngoba Injection Bovines & Swine